अर्धवार्षिक कृषि उपज निकासी : बढ्यो अलैँची र चिया, अदुवास्थिर - कृषि पत्रिका
अर्धवार्षिक कृषि उपज निकासी : बढ्यो अलैँची र चिया, अदुवास्थिर
किरण पौड्याल बिहिबार २२ माघ, २०७७
गत वर्षको तुलनामा चालु वर्षमा पनि अलैँचीका भाउमा सुधार आएकाले पनि आम्दानी बढेको हो । गत वर्षमा रु. दुई अर्ब ५१ करोड ८२ लाख १० हजार बराबरको निकासी भएको थियोे भने यस वर्ष रु. तीन अर्ब ८१ करोड ७६ लाख ४१ हजार बराबरको निकासी भएको तथ्याङ्कले जनाएको छ । गत आवको साउनदेखि पुससम्ममा ३१ लाख ३२ हजार ८३७ किलो अलैँची निकासी भएकामा यस आवमा ४७ लाख ७५ हजार ९८३ केजी निर्यात भएको छ ।
व्यवसायी मातृका घिमिरेका अनुसार अलैँचीको वास्तविक भाउ किसानले बुझेकाले पनि निकासी चाँडै गरेका हुन् । कुनै बेला प्रतिमन रु. एक लाख पुगेको अलैँचीको मूल्य अझै पनि किसानमा त्यो धङ्धङी रहिआएको छ । केही किसानले अब त्यो किसिमको भाउ नआउने बुझेकाले पनि कम समय भण्डारण गरेर अलैँची बजार पु¥याएको उहाँको भनाइ छ । यस वर्ष साउन–पुसको समयमा अलैँचीको निकासीमा सुधार भएर नेपालबाट निर्यात हुने तेस्रो प्रमुख वस्तुमा परेको छ ।
गतको वर्षको तुलनामा पनि यस वर्ष समग्र निकासी बढेको देखिन्छ । यसले राष्ट्रको शोधानान्तर घाटा घटेको छ । गत आवको यस अवधिमा आयातको तुलनामा सात दशमलव छ प्रतिशतको निकासी भएकामा यस वर्ष पाँच दशमलव नौ प्रतिशतको निकासी भएको देखिन्छ । यस आव साउनदेखि पुससम्ममा रु. ६० दशमलव ८० विलियनको निकासी भइकामा रु ६६१ विलियन बराबरको पैठारी भएको छ । हालसम्मको जम्मा व्यापार रु. ७२२ विलियन बराबरको आयात–निर्यात भएको छ । केन्द्रको तथ्याङ्कअनुसार रु. ६४५ विलियन बराबरको घाटा भएको देखिन्छ । आयात र निर्यात बीचको अन्तर हेर्दा आयातभन्दा निर्यात १० दशमलव नौ बराबर बढी हो ।रासस